Fanarenana fotodrafitrasa: novahan’ny MAHTP ny olan’ny lalana Anjiajia-Mahajanga | NewsMada
Fanarenana fotodrafitrasa: novahan’ny MAHTP ny olan’ny lalana Anjiajia-Mahajanga
Ho nofy ratsy sisa afaka andro vitsy. Niditra an-tsehatra avy hatrany nanarina ny fahatapahan’ny lalana eo Anjiajia, Ambondromamy ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy (MAHTP), ny asabotsy teo. Nisedra olana ny mpitatitra sy ny mandeha.
Nidina ifotony namaha olana avy hatrany. “Hametrahana karazana tetezana vonjimaika io lavaka be io. Tokony ho afaka mandeha daholo ny fiara, afaka iray andro eo ho eo. Mbola ny fiviliana vonjimaika ao anaty rano aloha izao no andehanan’ireo fiara”, hoy ny minisitry ny MAHTP, Andrianainarivelo Hajo tany an-toerana, ny faran’ny herinandro teo. Natsidiny sahady fa hametraka fotodrafitrasa maharitra isika manomboka izao raha manify sy tsy maharitra ny ankamaroan’izany.
Tapaka nanomboka ny alarobia izany lalana izany, noho ny andro ratsy. Nofaohin’ny rano ireo bizo teo ka nihotsaka tanteraka. “Efa efatra andro izahay teto foana… Nitombo ny fandaniana rehetra ao anatin’izany. Mahatratra 2 hatramin’ny km ny halavan’ny fiara mitandahatra amin’ny an-daniny sy an-kilany, miandry ny fvahan’ny olana teto”, hoy ny mpamily kamiao iray.
Tsy maintsy eo hatrany ny fanararaotana
Afaka nandeha kosa ireo fiara madinika sy ny 4×4 ary ny taksiborosy, saingy midina avokoa ny mpandeha, miampita ilay rano nanaovana ny fivilian-dalana. “Manakarama mpibata kesika voatabia nentina avy any Antananarivo, miampita sy hifindrana amin’ny kamiao iray hafa izahay. 1 000 Ar ny miloloha ny iray… Ampidirina anaty masonkarena avokoa izany”, hoy ny mpamatsy legioma. Tsy ela koa ny mponina eny amin’ny manodidinana , tahaka ny efa fahita eto amintsika. Mivarotra eo amoron-dalana izy ireo, ankoatra ireo tanora mikarama mitaona entana. “Manomboka amin’ny 3 000 ka hatramin’ny 4 000 Ar ny lovia iray, arakaraka ny laoka... Ny kafe misy ronono sandaina hatrany amin’ny 6 00 Ar… ”, hoy ny ramatoa mpivarotra iray. 25 000 Ar ny saran-dalana Antananarivo – Anjiajia tamin’ny nahatapahan’ny lalana tanteraka.
Efa mijery ny vahaolana : RN44 sy ny RN6…
Mbola hafa indray ny aloa mandeha mankany Mahajanga avy eo.
Nampanantena ny MAHTP fa tokony ho vita anio izany. Efa mamaha ny olana amin’ny fahatapahan’ny lalana sy ny tetezana any amin’ny faritra hafa koa ny fanjakana. Anisan’izany ny any amin’ny RN6 sy ny RN44 sy ireo tena miantoka ny toekarem-pirenena…
Sary sy soratra : Synèse R.